Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Blossom Houston na-agbatịkwu onyinye mmeghe ọhụrụ nye otu dị iche iche
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Blossom Houston na-agbatịkwu onyinye mmeghe ọhụrụ nye otu dị iche iche
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ihe mgbakwunye kachasị ọhụrụ na ọnọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ okomoko nke Houston, Blossom Hotel Houston ewepụtala ọtụtụ onyinye oge dị mkpirikpi emebere iji nyere ndị na-ahazi mmemme aka ime ihe kacha mma na nzukọ ha. Site n'inweta isi ihe iguzosi ike n'ihe ugboro atọ na ịnweta nkwụghachi ụgwọ ruru 5% na ụgwọ nna ukwu iji nweta ego na-emesapụ aka na akụrụngwa ihe onyonyo na ọnụ ahịa mmasị na ebe obibi ndị ọrụ, ndị ọkachamara MICE na-achọ ịnabata mmemme ọzọ na Houston ga-ahụ ọtụtụ ihe masịrị ha.
N'agbata ugbu a na 31 Disemba 2021, Nkwalite nkwari akụ Ọhụrụ na-enye ohere dị iche iche.
A na-edobe akwụkwọ n'etiti 1 Jenụwarị 2022 na 31 Maachị 2022, nkwalite mmemme gị kwalite na-enye ndị na-eme atụmatụ nzụkọ uru karịa.
Blossom Hotel Houston na-anya isi 9,000 square ụkwụ nke ohere mmemme ọtụtụ ọrụ maka mgbakọ, ọgbakọ ngwakọ, ihe ngosi ahia, nzukọ ọmụmụ, mgbagha ndị isi, na nkuzi.
Dị nso NRG Stadium na Texas Medical Center, Blossom Hotel Houston na-anya isi 9,000 square ụkwụ nke multi-functional omume ohere na-asọpụrụ dị iche iche mkpa nke ọ bụla otu, gụnyere mgbakọ, ngwakọ ogbako, ahia show, nzukọ ọmụmụ, Executive retreats na ogbako. Nnukwu ọnụ ụlọ ogbako, Luna Ballroom, na-anya isi ihe ngosi ọdịyo ọhụụ ma nwee ike ịnabata ihe ruru mmadụ 250, yana igosi ebe a na-arụ ọrụ nke ọma. Site n'ịdị jụụ ya, isiokwu agba agba nke ọnwa na-emetụ n'ahụ, ụlọ ịgba egwu na-enye ọnọdụ zuru oke maka agbamakwụkwọ na ememe ọha. Enwere ike iduzi nkwụsịtụ na obere nzukọ n'ime ụlọ nzukọ itoolu ndị ọzọ nwere atụmatụ ala na-agbanwe agbanwe na nhazi oche iji nabata ụdị mmemme ọ bụla site na nnọkọ ụlọ ọrụ nchịkwa na ihe ngosi ụdị ihe nkiri na nri ụtụtụ netwọk na-adịghị ahụkebe na ihe ngosi ahịa teknụzụ.
Ọdabara maka mmemme nke opekata mpe ndị ọbịa 10 debara akwụkwọ ma mee n'etiti ugbu a na Disemba 31, 2021, Nkwalite nkwari akụ ọhụrụ na-enye ohere dị iche iche:
5% kwụsịrị na ụgwọ nna ukwu na ụgwọ niile tozuru oke
Amụma mgbagha na-agbanwe agbanwe
Otu ọnụ ụlọ ekele maka ọnụ ụlọ 35 ọ bụla akwadoro
Nchekwa ego na ebe obibi ndị ọrụ
Nchekwa 20% na akụrụngwa audiovisual
Ọkọlọtọ Wi-Fi n'ụlọ ihi ụra na ụlọ nzukọ
ngafe 10 na-adọba ụgbọala ekele.
A na-ede akwụkwọ n'etiti 1January 2022 na 31 Maachị 2022, the Kwalite mmemme gị nkwalite na-enye ohere ndị na-eme atụmatụ nzukọ na-edobe opekata mpe ụlọ iri kwa abalị na/ma ọ bụ na-emefu opekempe $10 na nri ịhọrọ uru abụọ ọ bụla:
3% kwụsịrị na ụgwọ nna ukwu na ụgwọ niile tozuru oke
Otu ezumike kọfị na-enye ekele (nkeji 60 nke ọrụ na-aga n'ihu)
Wi-Fi emelitere ekele na oghere nzukọ
Isi ihe nhazi ụgwọ ọrụ Triple Stash.
Ihe eji enyere ndụ aka nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke nwere akụkọ 16 gụnyere ụlọ ndị ọbịa 267 okomoko na ụlọ ndị na-egosipụta ebe obibi sara mbara, nnukwu ọkụ eke na ihe ịchọ mma a nụchara anụcha, nke pere mpe. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ na-enyekwa ihe oriri ndị ọzọ okomoko, gụnyere ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, 24/7 Fitness Center nke Peloton® kwadoro; ọdọ mmiri n'elu ụlọ na ebe ezumike na-anya isi na-ele anya nke ogbe ndịda Houston. Maka ntinye akwụkwọ na ozi ndị ọzọ gbasara onyinye, biko gaa na BlossomHouston.com.
Blossom Holding Group ga-ewepụta echiche US mbụ ya, Blossom Hotel na Houston, ahụmịhe mba ụwa ọhụrụ gbanyere mkpọrọgwụ na Space City. Ụlọ nkwari akụ ahụ na-etinye ndị ọbịa naanị nzọụkwụ site na ụlọ ọrụ ahụike kachasị na ụwa yana azụmahịa na ebe ntụrụndụ kacha elu nke Houston, yana dịka ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha nso na NRG Stadium, ọ dịkwa nso na ebe nkiri Houston na-ewu ewu. Ma na-eme njem maka mkpa ahụike, azụmahịa ma ọ bụ ihe ụtọ, ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ụdị dị iche iche nke Houston, bụ nke a na-egosipụtakwa na ụlọ nkwari akụ nke ụlọ nkwari akụ na mgbọrọgwụ ikuku nke obodo ahụ, mgbe ị na-erite uru nke ụlọ ahịa na-ere ahịa nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ abụọ chef lekwasịrị anya, ihe eji eme ihe na-enweghị atụ. na ọrụ, ọnụ ụlọ ndị ọbịa okomoko na plethora nke mmemme na oghere nzukọ. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na BlossomHouston.com ma ọ bụ soro anyị na Facebook na Instagram.